Serivisy fanatanterahana ny varotra ECommerce China | Sunson
Inona ireo serivisy fanatanterahana?
Ny serivisy fanatanterahana dia trano fanatobiana entana an'ny antoko fahatelo izay manomana sy mandefa ny baiko ho anao. Izy io dia manao izany avy amin'ny ivon-toerany. Ny serivisy fanatanterahana ny ecommerce dia mety indrindra amin'ireo orinasa tsy te-hiatrika ny fandefasana entana na nihoatra ny fahaizan'ny mpivarotra efa misy ka tsy afaka mandefa baiko intsony izy ireo.
Fanatanterahana mandeha ho azy
1.Sunson API dia ahafahanao mampiditra ny tranokalanao sy mampifanaraka ny angona.
2.Fampidirana miaraka amin'ny rafitray hanampy anao hanamora sy hanamora ny fanatanterahana anao.
3.WMS (Warehouse Management System) dia noforonina hanaraha-maso ny fotoana tena izy sy ny fahombiazany avo kokoa.
Fanatanterahana eCommerce manerantany
Ny eCommerce miampita sisintany dia ahafahan'ny mpanjifa manerantany mahita ny magazay sy mividy entanao. Ny asanao lehibe indrindra dia ny mampiasa vola amin'ny marketing mba hanitarana ny orinasanao eCommerce. Ny asanay dia ny mampihena ny enta-mavesatra ho anao, manefa sy mandefa ny entanao ho eo am-baravaran'ny mpanjifanao.
Vahaolana feno momba ny eCommerce
Ny serivisy fanatanterahana eCommerce ilainao, toy ny fitehirizana, ny fakana, ny fonosana ary ny fandefasana dia azo atao ao amin'ny Sunsoneorot. Taorian'ny fanatsarana an-taonany maro dia nanatsotra sy nanamora ny fizotran'ny fanatanterahana izahay. Noho izany, mila miasa tsotra fotsiny ianao, ary ny rafitra fanatanterahana mandeha ho azy no hitantana ny ambiny.
Ny vahaolana Ecommerce Fulfillment Solution dia misy:
Fitehirizana maimaim-poana mandritra ny 90 andro
Famonosana marika sy namboarina
Mametraha fitsipika momba ny fandefasana mandeha ho azy
Araho maso ny vola lany amin'ny fotoana tena izy ary tantano ny faktiora
ny mombamomba ny fanarahana dia halefa ho azy any amin'ny mpividy
Ampifandraiso mora foana ireo fivarotana an-tserasera
Ny fampifandraisana ireo fivarotana an-tserasera amin'ny Sunsoneailoa dia mamela ny baiko halefa ho azy ao amin'ny rafitray ary hotanterahinay sy halefanay avy any amin'ny trano fivarotanay Shina ho an'ny mpanjifanao manerantany. Ary havaozina amin'ny magazay ny isa fanarahan-dia rehefa manamarika ny baiko efa vita izahay.
Azontsika atao ny mampifandray mivantana amin'ny ankamaroan'ny sehatra fivarotana eCommerce ary tsy misy fetra ny isan'ny fivarotana azonao ampifandraisina ao amin'ny kaonty fanatanterahana tokana.
Vita sinoa? Avy eo magazay any Shina ary halefa avy any Shina!
Ny serivisy fanatanterahana baiko Sunsoneorot eCommerce dia mety ho an'ireo mpivarotra an-tserasera izay manome ny vokatra avy any Shina na mivarotra vokatra vita sinoa.
Ny trano fanatobiana entana dia any Shenzhen, Sina, izay eo akaikin'ny mpanamboatra anao. Midika izany fa ambany kokoa ny vidin'ny fitehirizana sy ny fanatanterahana ary fohy kokoa ny fotoana fizarana.
Tsy izany ihany fa manome koa tolotra manampy vidiny izahay hanatsarana na hanatsarana ny kalitaon'ny serivisy fanatanterahana, toy ny: fakana avy amin'ny orinasa, marika feno ary fonosana mahazatra.
Serivisy lojika eCommerce marobe
Ny vahaolana logistika dia manarona firenena sy faritra 200+ manerantany amin'ny alàlan'ny serivisy paositra, tsipika manokana ary fanaterana mivantana. Manomboka amin'ny fanatanterahana ny eCommerce hatramin'ny fanaterana ny varotra, manolo-tena izahay hanamora ny fandefasana eran-tany ho anao. Hiresaka momba ny olana momba ny fitaterana sy ny fadin-tseranana izahay. Ny serivisy DDP sy DDU anay dia tsy maintsy ananana ihany koa ho an'ny ankamaroan'ny mpivarotra eCommerce.
Fahatanterahan'ny orinasa Ecommerce China
Serivisy fanatanterahana ecommerce
Trano fanatanterahana ecommerce
Fanatanterahana ny baiko ecommerce
Drafitra fanatanterahana ny baikon'ny ecommerce
Fahatanteraka ny varotra varotra